Jurgen Klopp oo rikoodh muhiim ah ku garaacay Ferguson iyo Wenger, kaddib guushii uu xalay ka gaaray kooxda Everton – Gool FM
(Liverpool) 05 Dis 2019. Tababaraha Liverpool Jurgen Klopp ayaa halkiisa ka sii waday rikoorrada wanaagsan uu ka sameynayo Reds, tan iyo markii uu yimid horyaalka Premier League.
Liverpool ayaa kaga adkaatay kooxda Everton garoonka Anfield kulankii adkaa ee Merseyside derby, kaddib markii ay ku garaacday 5-2, ciyaar ka tirsaneyd kulamada 15-aad horyaalka Premier League ee dalka England.
Haddaba Shabakada caalamiga ah ee “Goal” ayaa waxay shaaca ka qaaday in Jurgen Klopp uu gaaray guushiisii 100-aad ee horyaalka Premier League, 159 kulan uu hogaamiyay kooxda Liverpool, kaddib guushii ay xalay ka gaareen kooxda Everton.
Jurgen Klopp ayaa wuxuu rikoorkan ku garaacay Sir Alexander Ferguson oo 100 guul ee horyaalka Premier League ah ku gaaray 162 kulan, iyo Arsene Wenger oo isna 100 guul ee horyaalka Premier League ah ku gaaray 179 kulan.
Macalinka kaliya ee rikoodhkan kaga sarreeya Jurgen Klopp ayaa ah tababaraha haatan leyliga kooxda Tottenham Hotspur ee reer Portugal José Mourinho, kaasoo 100 guul ee horyaalka Premier League ah ku gaaray 142 kulan.
Abdirashid Ahmed Osman says:
Mardhow wuxuu u guuri doonaa booska 3 aad sababtoo ah hadii uu Pep uu badiyi 3 kulan asigaa booska 1aad kala wareegaya Jose oo isna 2aad u raran doona